Jaona 14 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Nosoratan’i Jaona 14:1-31
I Jesosy ihany no lalana ahafahana mifandray amin’ny Ray (1-14)
“Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana” (6)
Nampanantena i Jesosy fa hanome ny fanahy masina (15-31)
“Ny Ray dia lehibe noho izaho” (28)
14 “Aza avela hitebiteby ny fonareo.+ Minoa an’Andriamanitra,+ dia minoa ahy koa. 2 Ao an-tranon’ny Raiko misy fonenana be dia be. Tsy ho niteny an’izany taminareo aho raha tsy nisy izany. Handeha hanomana toerana ho anareo mantsy aho.+ 3 Ary rehefa lasa aho dia hanomana toerana ho anareo, ary ho avy indray ka handray anareo any amiko. Amin’izay dia izay misy ahy no hisy anareo koa.+ 4 Ary fantatrareo ny lalana mankany amin’izay alehako.” 5 Dia hoy i Tomasy:+ “Tompo ô, tsy fantatray ange izay alehanao e! Koa ahoana no ahafantaranay ny lalana mankany?” 6 Hoy i Jesosy: “Izaho no lalana+ sy fahamarinana+ ary fiainana.+ Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.+ 7 Raha efa nahalala ahy ianareo, dia ho efa nahalala ny Raiko koa. Fantatrareo izy manomboka izao, sady efa hitanareo.”+ 8 Hoy i Filipo: “Tompo ô, asehoy anay ny Ray dia efa ampy anay izany.” 9 Dia hoy i Jesosy: “Efa izay ela izay aho no niaraka taminareo, dia mbola tsy mahafantatra ahy ihany ve ianao, ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny Ray koa.+ Koa maninona ianao no miteny hoe: ‘Asehoy anay ny Ray’? 10 Tsy mino angaha ianao hoe izaho tafaray amin’ny Ray, ary ny Ray tafaray amiko?+ Tsy ny hevitro fotsiny no lazaiko aminareo,+ fa ny Ray izay tafaray foana amiko no manao ny asany. 11 Minoa ny teniko hoe izaho tafaray amin’ny Ray ary ny Ray tafaray amiko. Raha tsy izany, dia minoa na dia noho ny asa ataoko fotsiny aza.+ 12 Lazaiko marimarina aminareo fa izay maneho finoana ahy, dia hanao ny asa ataoko koa. Hanao asa lehibe noho izany aza izy,+ satria izaho hankany amin’ny Ray.+ 13 Ary izay rehetra angatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko mba hanomezam-boninahitra ny Ray amin’ny alalan’ny Zanaka.+ 14 Raha mangataka zavatra amin’ny anarako ianareo, na inona izany na inona, dia hataoko. 15 “Raha tia ahy ianareo, dia hankatò ny didiko.+ 16 Ary hangataka amin’ny Ray aho, ka homeny mpanampy* hafa ianareo, mba ho eo aminareo mandrakizay,+ 17 dia ny fanahin’ny fahamarinana.+ Tsy afaka mahazo azy io izao tontolo izao, satria tsy hitany na fantany izy io.+ Ianareo no mahalala azy io, satria eo aminareo foana izy io sady ao anatinareo. 18 Tsy hamela anareo ho irery* aho, fa hiverina atỳ aminareo.+ 19 Kely sisa dia tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita ahy,+ satria velona aho dia ho velona ianareo. 20 Amin’izay andro izay dia ho fantatrareo fa izaho tafaray amin’ny Raiko, dia ianareo tafaray amiko, ary izaho tafaray aminareo.+ 21 Izay manaiky ny didiko ka mankatò an’izany, dia izy no tia ahy. Ary izay tia ahy dia ho tian’ny Raiko. Ho tia azy aho, ka hataoko izay hahafantarany tsara ahy.” 22 Hoy i Jodasy+—tsy ilay Iskariota—: “Tompo ô, fa maninona no hoe izahay no hataonao mahafantatra tsara anao, fa tsy izao tontolo izao?” 23 Dia namaly i Jesosy hoe: “Raha misy tia ahy, dia hankatò ny teniko izy,+ ka ho tian’ny Raiko. Dia hankany aminy izahay ary hiara-mipetraka aminy.+ 24 Izay tsy tia ahy dia tsy mba mankatò ny teniko. Tsy ahy ny teny renareo, fa an’ilay Ray naniraka ahy.+ 25 “Lazaiko aminareo izany, dieny mbola eto aminareo aho. 26 Ilay mpanampy, izany hoe ny fanahy masina, izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako, anefa no hampianatra anareo ny zava-drehetra, sady hampahatsiahy anareo an’izay rehetra nolazaiko taminareo.+ 27 Fiadanana no avelako ho anareo. Omeko anareo ny fiadanako.+ Hafa mihitsy anefa ny fomba anomezako azy, fa tsy hoatran’ny an’izao tontolo izao. Aza avela hitebiteby na hatahotra àry ny fonareo. 28 Efa henonareo ilay teniko taminareo hoe: ‘Handeha aho, dia hiverina atỳ aminareo indray.’ Raha tia ahy ianareo, dia ho faly hoe handeha ho any amin’ny Ray aho, satria ny Ray dia lehibe noho izaho.+ 29 Efa nolazaiko taminareo mialoha izany, amin’izay ianareo mino rehefa tena mitranga izany.+ 30 Tsy hiteny betsaka aminareo intsony aho, fa efa ho avy ilay mpitondra an’izao tontolo izao.+ Tsy manana fahefana amiko anefa izy.+ 31 Fa mba hahafantaran’izao tontolo izao fa tiako ny Ray, dia izay nasain’ny Ray nataoko mihitsy no ataoko.+ Mitsangàna dia andao isika hiala eto.
^ Na: “mpampionona.”
^ Na: “ho kamboty.”